लाचोकमा लठाउने कुरा प्रयोग गरी बृद्धा बुवाआमा माथि आक्रमण,कसले गर्यो यस्तो(भिडियोसहित) – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. लाचोकमा लठाउने कुरा प्रयोग गरी बृद्धा बुवाआमा माथि आक्रमण,कसले गर्यो यस्तो(भिडियोसहित) – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
लाचोकमा लठाउने कुरा प्रयोग गरी बृद्धा बुवाआमा माथि आक्रमण,कसले गर्यो यस्तो(भिडियोसहित)
रेखा पौडेल ,पोखरा
कास्कीको माछापुछ्रे गाउँपालिका वार्ड न ४ लाचोकमा अचम्मको घटना घटेको छ।
स्थानिए र पीडितका भनाई अनुसार: _ बृद्धा बुवाआमाको छोरा बुहारीहरू कोहि विदेश छन भने कोहि पोखरामा छन् । लाचोकको माछापुछ्रे गाउँपालिका वार्ड न ४को कार्यालयको नजिकै रहेको घरमा अचम्मकै घटना घटेको छ। बजारको जस्तै चलपल हुने ठाउँमा यस्तो भयो भन्दा यस क्षेत्रका मानिसहरु सबै चकित परेका छन।
घरमा बुढा बुवा आमा बस्दै आउनुहुन्थ्यो। अचानक घरमा अन्जान व्यक्ति आउछन र पहिला आमालाई केहि लट्ठ पार्ने कुरा प्रयोग गर्छन। बृद्धा आमा माथि उनीहरुले दाउराले टाउकोमा हान्छन। टाउकोमा हानेपछि आमा लथ्हिएको अवस्थामा केहि मेसो पौनुहुन्न्न। त्यसपछि उनीहरु घर भित्र प्रवेश गर्छ र बुवालाई लट्ठ पार्ने कुरा प्रयोग गर्छन। बुवालाई पनि आक्रमण गर्छन र त्यहा देखि भाग्न सफल हुन्छन । दुई जना बुढा बुढीलाई नै उनीहरुले मर्ने गरी हातपात गर्छन तर रहस्यको कुरा त्यहा घरमा भएका सामान र गहना कतै केहि पनि छुदैनन। यसको अर्थ उनीहरुले केहि व्यक्तिगत रिसिबी वा सुनियोजित रुपमा बुवा आमालाईनै मार्ने हिसाबले आफ्नो कदम चालेको हुनसक्ने स्थानिएको भनाई छ।
रातीको समयमा बत्तिको मिटर बन्द गरेर सुरु कुटपिट गरेको हुन् सक्ने गाउलेको अनुमान रहेको छ। आज बुवा आमा छिटै सुत्नु भएछ भन्ने ठानेर कोहि पनि त्यो घरमा घटना भएको दिनमा पुगेका हुदैंन। भोलिपल्ट बिहान छिमेकी आखात लिएर एकजना हेराउनु पर्यो बुवासँग भन्दै घरमा बोलाउदा आमा घर बाहिर र बुवा घरभित्र बेहोस अवस्थामा रहेको देख्छन। सुरुमा त्यहा पुग्ने मानिसका अनुसार आगन भरी रगत नै रगत थियो भने भित्र बुवाको बिस्तारा भरी रगत बगेको थियो।
अहिले आमालाई उपचारपछि घरमा राखिएको छ भने बुवालाई पोखराको फिस्टेल अस्पतालमा उपचार भैराखेको छ।
हामीले धेरै बुझ्ने र सोध्ने प्रयास गरेका छौ। आखिर कसले गर्यो यस्तो ? बृद्धा बुवा आमा माथि कसले के कारणले गर्यो यस्तो भन्ने कुरा यतिबेला अन्योल भएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले यसलाई गम्भीर तरिकाले सुस्म अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ भने अहिले सम्म पनि घटना घटाउने ब्याक्ति पक्राउ परेको छैन । प्रहरीका अनुसार गाउ लगाएत गाउ बाहिरका संकास्पद व्यक्तिहरु संग अनुसन्धान भैराखेको छ। बुवा आमाको मोबाईल पनि छेक भैराखेको छ । यस्तैगरी प्रहरीले छिटैनै घटना घटाउने मानिसहरुलाई पत्ता लगाएर कानुन बमोजिन कारवाही गर्ने प्रतिबद्ता व्यक्त गरेका छन।
पोखरामा आज सम्म यस्तो घटना नघटेको र यो घटना पछि गाउमा देउसो पनि घर बाहिर निस्कन डर भएको गाउका मानिसहरु बताउछन। आखिर किन बृद्धा बुवा आमालाई नै यस्तो गरे होलान? कसले गर्यो होला यस्तो लगाएतका प्रशंहरु उठ्नु स्वोभाबिक नै हो। हामी आशा गरौ प्रहरीले यसलाई सुष्म अनुसन्धान गर्ने छर छिटैनै यस्तो घटना घटाउने लाई पत्ता लगाउने छ। ।।
(नोट : हामीले सम्प्रेषण गरेका कुराहरु हामीले स्थानिएको भनाईलाई आधार मानेर समाचार बनाएका छौ , घटनाको वास्तविकता प्रहरीको अनुसन्धानले बाहिर ल्याउने नै छ प्रतिक्षा गर्नुहोला )
हेर्नुहोस अबको क्रममा के भन्छन स्थानीए ?कस्तो थियो घटनाको प्रकृति ?हामी अबका केहि कार्यक्रम यहि बिषयमा प्रस्तुत गर्नेछौ हेर्दै गर्नुहोला :-
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको December 23, 2020 December 24, 2020 425 Viewed